SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲအီတလီဝေငှ | Data Recovery
နေအိမ် → SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲအီတလီဝေငှ
>ဆော့ဖ်ဝဲ activation ၏လွတ်လပ်သောတည်ဆောက်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့အောက်ကညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ ကျေးဇူးပြု. RescuePRO®:
1. အောက်တွင်သင့် SanDisk လွန်ကဲကဒ်နှင့်အတူလက်ခံရရှိသည့်ကူပွန်ကိုရှေးခယျြကျေးဇူးပြုပြီး.
>>>>အကြံပြုချက်များ: အဆိုပါကူပွန်လို့ပြောသို့မဟုတ်RescuePRO®သို့မဟုတ်RescuePRO® Deluxe ပါလိမ့်မယ်, အညီရှေးခယျြ.
**** သင်တစ်ဦးကူပွန်RescuePRO® SSD ကိုရှိပါက, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ2. သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီသောကူပွန်ရွေးချယ်မှုအောက်ကခလုတ်တဦးကိုရှေးခယျြ ကျေးဇူးပြု..3. အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ် ကျေးဇူးပြု. LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် အဆိုပါနံပါတ်စဉ်နဲ့ activation code ကိုရရှိရန်မည်ကဲ့သို့ညွှန်ကြားချက်များအတွက် RPRID.** ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: Se avete un coupon per RescuePro Deluxe con un numero di serie che inizia con RPRID-0305,
သင့်ရဲ့ကူပွန်အပေါ်ပုံနှိပ်ကြောင်းအဆိုပါနံပါတ်စဉ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောမဟုတ်ပါဘူးထားပါတယ်.သငျသညျထို့နောက်ပြည့်စုံနံပါတ်စဉ်များကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည် RPRID-0305 SanDisk အစားထိုးလက်ခံရရှိရန်. **
Se si utilizza Windows XP, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ per una copia di XP compatibile RescuePRO® standard or ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ per una copia di XP compatibile RescuePRO® Deluxe.
ထိတှေ့, အောက်ကခလုတ်ကနေ operating system ကိုရှေးခယျြနှင့် operating system ကိုများအတွက်ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျပုံစံတွေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ကျေးဇူးပြု.. သို့မဟုတ်, တနည်း, မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး (အမေရိကန်) အခွန် (866) 603-2195, ဒေသအလိုက် (727) 449-0891. ဥရောပကိုခေါ် +44 (0) 115 704 3306If you haveaRescuePRO® SSD coupon